कसरी चिन्ने रातो र सेतो मासु ?
२७ आश्विन २०७८, बुधबार ०४:५३
२७ असोज, २०७८ काठमाडौँ : दशैँमा प्रायः भान्सामा मासु पाक्ने गर्छ । अन्य समयभन्दा दशैँमा मासुका बिभिन्न परिकार खाने गरिन्छ । अझ फूलपातीदेखि पूर्णिमासम्म घरघरमा मासुका विभिन्न परिकारहरू बन्छन् । तर दशैंमा कस्तो मासु खाने त रु यसबारे तपाईंलाई जानकारी छ र ?
चिकित्सकका अनुसार स्वास्थ्यकालागि रातोभन्दा सेतो मासु फाइदाजनक मानिन्छ । सेतो मासु भनेको पक्षींजन्य मासु हो । अझ युरिक एसिड भएको बिरामीले त रातो मासु खानु हुदैँन । माछा र कुखुराबाहेक सबै खालका मासुलाई रातो मासु भनिन्छ । सामान्यतया स्तनधारी जनावरको मासुलाई रातो मासु भनिन्छ तर मासुकालागि काटिने जनावरको उमेर अनुसार पनि रातो र सेतो मासु भनिन्छ ।
बयस्क बङ्गुरको मासुलाई रातो मासु भनिन्छ भने कम उमेरको बङ्गुरको मासुलाई सेतो मासु भनिन्छ । रातो मासु हुने पशुमा खसी बोका, भेडा बाख्रा, भैँसी राँगा पर्छन भने पन्छीमा हाँस, कोयली, परेवा, सुतुर्मुर्ग तथा जङ्गली जनावरहरू (मृग, हरिण आदि) हुन् । – एजेन्सीको सहयोगमा
दैनिक अनार खानुका फाइदा नै फाइदा, यी हुन मुख्य ५ फाइदा
स्तन झोल्लिएको छ : यसरी गर्नुहोस् घरेलु उपचार
दसैँमा स्वस्थ रहन जिब्रोलाई नियन्त्रण, यी कुरामा ध्यान दिऔँ